विचारले मृत्यु र दुस्मनलाई एकैसाथ पराजित गरेको दिन (सन्दर्भ : २३ औँ बेथान वीरता दिवस) – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७५, १८ पुस बुधबार १६:३४ January 2, 2019 546 Views
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र पुस १९
यो महिना विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका महान् नेता एवम् विचारकहरू कमरेड जोसेफ स्टालिन र कमरेड माओ त्सेतुङको जन्मदिवसको महिना हो । संसारभरका माक्र्सवादी लेनिनवादी र माओवादीहरूले महान् स्टालिन र माओका योगदानहरू स्मरण गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् । मालेमावादीहरूले विश्वभर नै कमरेड माओको एक सय २६ औँ र कमरेड स्टालिनको एक सय ४१ औँ जन्मदिवस भव्यतापूर्वक मनाइरहेका छन् । नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि देशैभर यी दिवसहरू मनाइरहेको छ । ठीक यसैगरी महान् दार्शनिक कार्ल माक्र्सको दुई सयौँ जन्मशताब्दी संसारभर मनाइएको छ र नेपालमा पनि मनाइँदैछ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि यो महिना केही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमका कारण चर्चित र महत्वपूर्ण छ । २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको जनयुद्धको पहिलो सफल फौजी कारबाही भएको महिना २०५३ सालको पुस हो । २०५३ साल पुस १९ गते रामेछापको बेथान पानीघाट प्रहरीचौकीमा माओवादी जनसेनाका योद्धाहरूले त्याग, शौर्य र वीरता प्रदर्शन गर्दै हमला गरेका थिए र फौजी कमान्डर तीर्थ गौतमका साथै रामेछापकी सांस्कृतिक तथा विद्यार्थी योद्धा दिलमाया बम्जन र फत्त स्मालीमगरले बलिदानको बाटो रोज्नुभएको थियो । तीनजनाको बलिदानपछि सफल भएको बेथान पानीघाटको फौजी कारबाहीपछि प्राप्त हतियार नै माओवादी जनयुद्धका लागि अत्यावश्यक भौतिक–प्राविधिक शक्ति थिए । तिनै हतियार बोकेर हिँडेको माओवादीले त्यसपछि धमाधम लडाइँ र युद्धहरू जित्दै गयो र बीसौँ हजार जनमुक्ति सेनालाई हातहतियारले सुसज्जित बनाउन सफल भयो ।
निरङ्कुश राणा शासनको चकचकी चलिरहेकै समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कमरेड पुष्पलालको पहलमा २००६ साल वैशाख १० गते (१९४९, अप्रिल २२ मा भएको हो । पुष्पलालले नारायणविलास जोशी, निरञ्जनगोविन्द वैद्य र नरबहादुर कर्माचार्यको साथ लिएर भारतको कलकत्तामा नेकपाको स्थापना गर्नुभएको थियो । नेकपाको स्थापनाका कारकहरूमध्ये राणाशासनको अत्याचार, दमन र शोषण प्रमुख रहेको पाइन्छ । राणाशासनका विरुद्ध कृष्णलाल अधिकारीको मकैको खेती पुस्तकले निम्त्याएको मकैपर्व अर्थात् कृष्णलाल अधिकारीको हत्या, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र धरणीधर कोइरालाहरूले सञ्चालन गरेको जागरण कविता र लाइब्रेरी पर्व, राणाशासकहरूको दमन, राणा शासनका विरुद्ध क्रियाशील गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र शुक्रराज शास्त्रीको विसं १९९० को दशकको उत्तराद्र्धमा गरिएको हत्या, उक्त हत्याकाण्डविरुद्ध जनतामा पलाएको आक्रोश र प्रतिरोधी चेतना, काङ्ग्र्रेसबाट पुष्पलालको विद्रोह नेकपा स्थापनाका पूर्वाधारहरू हुन् ।
यस सन्दर्भमा सिर्जना र साहित्यका माध्यमबाट धरणीधर कोइराला, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद रिमालका क्रान्तिकारी चेतनाले ओतप्रोत काव्य सिर्जना र त्यसले समाजमा पारेको सकारात्मक प्रभाव पनि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाका आन्तरिक ऊर्जाका स्रोतहरू हुन् । संसारमै चरिरहेको मालक्र्सवाद लेनिनवादको प्रयोगको असर र भारतमा सञ्चालित कम्युनिस्ट आन्दोलन वा गतिविधिको प्रभाव नेपालमा नपर्ने कुरै भएन । १९८० सालको दशकमा जेलभित्रैबाट कृष्णलालले लेखेका थिए :
कीर्ति्बिना बन्दछ जीव लूलो
नेकपाको पहिलो महाधिवेशन २०१० सालमा अर्धभूमिगत रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा सम्पन्न भएको थियो । पुष्पलाललाई हटाएर मनमोहनलाई महामन्त्री चुन्ने महाधिवेशन बन्यो यो । २००८ सालमा पार्टीमा आएको सुधारवाद र यसपछिको २०१२ सालमा मनमोहनद्वारा राजामा बिन्तीपत्र चढाएर पार्टीलाई खुला गरिएको घटना स्मरणयोग्य छ । यी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनकै लागि काला दिनहरू हुन् ।
नेकपाको दोस्रो महाधिवेशन २०१४ सालमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै भयो । यो करिब खुलाखुला रूपमा भएको थियो तर पूर्ण खुला घोषणा गरिएको भने थिएन । यो महाधिवेशनले डा. केशरजङ्ग रायमाझीलाई महासचिव चुन्यो । यही महाधिवेशनको नेतृत्वले पार्टीलाई संसद्वादमा धकेल्यो । पछि रायमाझी नेतृत्वले घोषित रूपमै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई राजावादी धारतिर मोड्न खोज्यो । रायमाझीले २०१७सालको राजाको कदमलाई स्वीकार गरेपछि पार्टीमा लाइन सङ्घर्ष चर्कायो ।
२०१९ सालमा नेकपाको तेस्रो महाधिवेशन भूमिगत रूपमा भारतमा सम्पन्न भयो । यो महाधिवेशनले पार्टीको भित्री सङ्घर्षको समाधान गर्न सकेन । महाधिवेशनले एउटा लाइन पास ग¥यो तर अल्पमतमा परेका तुलसीलाल अमात्य महासचिव चुनिए । यसपछिका घटनाक्रमहरू पार्टी टुटफुट र विभाजनबाट अघि बढे । यसले झापा विद्रोह जन्मायो । तेस्रो महाधिवेशनपछि पार्टी विभिन्न गुटउपगुटमा विभाजित भई कम्युनिस्ट पार्टी अनेक समूहमा टुक्रिन पुग्यो ।
२०३१ सालमा नेकपाको चौथो महाधिवेशन भूमिगत रूपमा भारतमै सम्पन्न भयो । यसले मोहनविक्रम सिंहलाई महामन्त्री चुन्यो । यसबीचमा मोहनविक्रम र निर्मल लामाको फुटको घटना मुख्य थियो । यसको एउटै कारण चुनावमा भाग लिने कि बहिष्कार गर्ने, कार्यदिशामा सहरी विद्रोह कि दीर्घकालीन सशस्त्र विद्रोह गर्ने भन्ने थियो । २०३१ सालमा चौथो महाधिवेशन गरेर अगाडि बढेको एउटा कम्युनिस्ट घटक मोहनविक्रम सिंहको नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो । पाँचौँ महाधिवेशन २०४१ मा भारतमा भूमिगत रूपमै सम्पन्न भयो । यो महाधिवेशनले केही वैचारिक मुद्दा र राजनीतिक कार्यदिशालाई अमूर्त राखी विशेषतः सांस्कृतिक विषयको उत्थान गरेर मोहनविक्रम सिंहमाथिको कारबाहीलाई महाधिवेशनको मुख्य मुद्दा बनायो । पाँचौँ महाधिवेशनमा बहुमतको निर्णयले मोहनविक्रमलाई कारबाही गरी किरणलाई महामन्त्री चुन्यो । यो घटना नै तत्कालीन नेकपा (मशाल) मा पुनः फुटको कारण बन्न पुग्यो । मशाल र मसालमा पार्टी फेरि विभाजन भयो । नेकपा (मशाल) बहुमत पक्षको नेतृत्व किरणले गरे । अल्पमत पक्ष (मसाल) को नेतृत्व मोहनविक्रमले गरे । उनी अध्यापि आजीवनजस्तै गरी मसालको महासचिव नै छन् । त्यतिबेला महासचिवलाई महामन्त्री भनिन्थ्यो । अहिले पनि मोहनविक्रम आफूलाई महामन्त्री नै भनाइरहेका छन् । यसबीचमा महामन्त्री किरणले २०४५ को अन्त्यतिर प्रचण्डलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरे । यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलन र यसले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनमा आन्दोलनको पहल, कम्युनिस्ट समूहहरूका बीच एकताको पहल भयो । एकताकेन्द्र निर्माण भयो । एकतामहाधिवेशनको पहल भयो । २०४१ को पाँचौँ महाधिवेशनमा मोहनविक्रम सिंह सांस्कृतिक कारबाहीमा परेपछि किरण महामन्त्री चुनिएका थिए । मोहनविक्रम सिंहलाई पार्टीले अनैतिक यौनसम्बन्धका कारण पटकपटक कारबाही गरेको थियो । मोहनविक्रमले लामालाई शङ्कास्पद भन्ने र लामाले मोहनविक्रमलाई सांस्कृतिक विचलन भएको व्यक्ति भन्ने जुहारीजस्तै चल्यो । आखिरमा यी दुवै नेताले क्रान्तिको नेतृत्व गरेनन् ।
छैटौँ महाधिवेशन एकता महाधिवेशनका रूपमा २०४८ सालमा अर्धभूमिगत रूपमा चितवन माडीमा सम्पन्न भयो । यसले दुई महत्वपूर्ण कार्य ग¥यो : पहिलो, राजनीतिक कार्य्दिशामा ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’को कार्य्दिशा पारित ग¥यो । दोस्रो, सिद्धान्तमा ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद’ पारित ग¥यो । यससँगै नाम पनि ‘एकताकेन्द्र’बाट ‘माओवादी’ बनायो । नेतृत्वमा प्रचण्डलाई महामन्त्री चुन्यो । यसले २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धको थालनी ग¥यो । नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी समाजवाद स्थापना गर्ने भनी आरम्भ गरिएको जनयुद्ध १० वर्षसम्म सञ्चालन भयो । तर नेतृत्वको पलायन, आत्मसमर्पण र संशोधनवादमा भएको पतनका कारण राजतन्त्रको अन्त्य मात्र भयो । सातौँ महाधिवेशन : सातौँ महाधिवेशन कमरेड किरणको नेतृत्वमा २०६९ सालमा काठमाडौँ कमलादीमा खुला रूपमा सम्पन्न भयो । आठौँ महाधिवेशन ः रोल्पाको थबाङमा सम्पन्न भयो एकीकत जनक्रान्तिको कार्यदिशा पारित गर्दै र कमरेड विप्लवलाई महासचिव चयन गर्दै अघि बढ्यो । आज हामी यही नेतृत्व र कार्यदिशा कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ ।
सन्दर्भ भट्टेडाँडा मोर्चा
बेथान वीरता दिवसको तेस्रो र जनयुद्धको चौथो वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा माओवादी छापामारहरूले ललितपुर जिल्लाको भट्टेडाँडा प्रहरी चौकीमाथि सशस्त्र हमला गरे । हमलामा परी अधिकृतस्तरसहितका तीनजना प्रहरीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । चौकी जलेर नष्ट भयो । त्यो समाचार, मारिएका प्रहरीको फोटो र जल्दै गरेको प्रहरीचौकीको तस्बिरलाई त्यतिबेला माओवादीको मुखपत्र मानिने ‘जनादेश’ साप्तहिकले महत्वका साथ ‘भट्टेडाँडा प्रहरीचौकीमा साहसिक आक्रमण’ शीर्षकमा प्रकाशित ग¥यो ।
त्यतिबेला मैले नौलो बिहानी मासिकको सम्पादन÷प्रकाशन सुरु गरिसकेको थिएँ । नयाँ अङ्क पत्रिकाको तयारीका लागि केही सामग्री जम्मा पार्दै थिएँ । मैले झोलामा देशका विभिन्न ठाउँबाट सङ्कलन गरिएका ‘छापामार डायरी’ हरू पनि बोकेको थिएँ । ‘जनपक्षीय पत्रकार सङ्घ’ को मस्यौदा विधान पनि झोलामै थियो । मेरो प्रकाशोन्मुख कवितासङ्ग्रह ‘युद्धघोष’ को कम्प्युटर प्रति र ‘नौलो बिहानी’ का लागि केही समाचार तथा लेखहरू पनि साथमै थिए । म बेलुकाबेलुका ‘हिमालय टाइम्स दैनिक’ मा सम्पादनको काम पनि गर्थें र समाचार पनि लेख्थें ।
‘जनादेश’ कार्यालयमा छलफल चलिरहेकै थियो । एक्कासि पत्रिकाको कार्यालयकोठाको ढोकामा भिडन्तका लागि फायर खोल्न तैनाथझैँ देखिने दर्जनौँ पुलिसहरू देखापरे । उनीहरूले हामीलाई रुखो स्वरमा कतै डेग नचल्न आदेश दिए । कोठाभित्र रहेको ५/७ जना साथीहरूका कन्चटमा बन्दुक तेर्सिइसकेका थिए । थाहा भयो, हामीलाई प्रहरीले घेरा हालिसकेको थियो । पत्रिकाको कार्यालय रहेको अर्काे कोठा पनि घेराउमा परिसकेछ । केही साथीहरू भ¥याङबाटै सुरक्षित स्थलतर्फ लाग्नुभएछ । ‘जनादेश’ ले त्यसै रात भट्टेडाँडा कारबाहीको समाचार सचित्र प्रकाशन गरेपछि त्यहाँ प्रहरीले हारेको समाचार, चौकीको समाचार लेख्ने, तस्बिर खिचेर ल्याउने पत्रकार र चौकी आक्रमण गर्ने छापामार खोज्न भनी ३/४ वटा प्रहरी भ्यानले सिङ्गै घर घेराउ गरिसकेका रहेछन् ।
कार्यालयबाट म, शक्ति दाइ, धनबहादुर मगरका दाजुभाइ, रेवती सापकोटालगायत सातजना गिरफ्तार भयौँ । ‘जनादेश’ प्रकाशित हुने नजिकैको इन्द्रेणी छापाखानाबाट प्रोप्राइटर ज्ञानेन्द्र मानन्धर, एकाउन्टेन्ट, प्रेसम्यानलगायत सातजनालाई पनि भ्यानमा ल्याएर कोचियो । त्यतिबेला सामूहिक गिरफ्तारीमा पर्नेमा हामी १६ जना थियौँ । हामीलाई बन्दुककै बीचमा वडा प्रहरी कार्यालय सिंहदरबार पु¥याइयो । त्यहाँ पु¥याएर हामीलाई हतकडीसहित जमिनमुनिको ओसिलो, अन्धकार कोठामा राखियो । एकआपसमा बोल्नसम्म दिइएन । पालैपालो अर्कै कोठामा लगेर अपराधीलाईजस्तो छातीमा केही लेखेर टाँस्दै पोजपोजका तस्बिर खिचियो । ‘जनादेश’ का वितरण सहयोगी मित्र धनबहादुर मगरलाई बयान लिने क्रममा ‘तैँ होइनस् भट्टेडाँडामा हाम्रा साथी मारेर फोटो खिच्ने ?’ भन्दै बन्दुकका कुन्दा र बुटले हानेर रक्तमुछेल पारियो । हामीलाई भिडन्तमा सहभागी र मतियारका रूपमा नानावली प्रश्न सोध्ने र वास्तविकता बताउन नदिने वातावरण बनाइयो ।
राजधानी काठमाडौँको मुटुबाटै पत्रकार र प्रेसका सञ्चालकसहित १६–१६ जनालाई गिरफ्तार गरिएपछि राजधानीमा मात्र नभएर देशभर सनसनी मच्चियो सुकेको खरमा आगो लागेजस्तै । राजधानीबट दिउँसो प्रकाशनमा आउने पत्रिकाले हामी गिरफ्तार भएको खबर प्रकाशित/प्रसारित गरिरहेका थिए । स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रजातन्त्रको खोल ओढेको काङ्ग्रेस सरकारले दिनदहाडै गरेको हस्तक्षेपको चौतर्फी विरोध हुन थाल्यो राष्ट्रिय रूपमै । पत्रकारितासम्बन्धी सङ्घसंस्था, राजनीतिक पार्टी, मानवअधिकारलगायत क्षेत्रबाट हस्तक्षेपको विरोध र रिहाइका लागि स्वरहरू उरालिए । प्रहरीले कार्यालयका सम्पूर्ण सामान कब्जा गरेपछि ढोकामा ताल्चा झुन्ड्याइदिएको थियो । खानपिनको कुरा त टाढै थियो, पिउने पानीसम्म दिइएन । सरकार कति क्रूर र निरङ्कुश देखियो भने हामीमाथि कुनै मानवीय व्यवहार नै गरिएन । त्यस साँझ ज्ञानेन्द्र दाइको परिवारले उहाँका लागि ल्याइदिएको सीमित खाना बाँडेर खायौँ ।
त्यतिबेलाको अनामनगरस्थित वडा प्रहरी कार्यालय सिंहदरबारका इन्सपेक्टर हुनुपर्छ ती, थर चुडाल हो, नामचाहिँ भरत हो कि के हो, कति क्रूर व्यवहार गरे भने बयान गरिसाध्य छैन । सरकारले पत्रिकाको कार्यालय र प्रेसबाट गिरफ्तार गरिएका मानिसहरूलाई अलग्याएर र फुटाएर भिन्नाभिन्नै ठाउँमा लैजाने निर्णय गरेछ क्यार । हामीले नमान्दानमान्दै पनि अलगअलग भ्यानमा राखेर तितरबितर पार्न थाल्यो । कसैलाई अन्तैको हिरासतमा लगेछ ।
मध्यरातमा हातमा आधुनिक हतियार लिएका दर्जनौँ प्रहरी हामीलाई भ्यानमा चढाउने तयारीमा थिए । उनीहरू हामीप्रति अत्यन्त असहिष्णु, क्रूर र आक्रामक व्यवहार गरिरहेका थिए । तिमी, तपाईंजस्ता शब्दहरू सायद उनीहरूका शब्दकोषमै थिएनन् । उनीहरूले हामीलाई जुन ‘अपराध’ मा दोषी ठह¥याएर वा शङ्का गरेर गिरफ्तार गरेका थिए, हामी दोषी वा जबाफदेही व्यक्ति भए पनि उनीहरूको व्यवहार सद्भावपूर्ण हुनुपर्ने थियो । उनीहरू तर्साएर, हप्काएर, दप्काएर र जङ्गली व्यवहार देखाएर हामीलाई घटनामा फसाउने षड्यन्त्र गरिरहेका थिए । हामीलाई धकेलेर जथाभाबी भन्दै भ्यानभित्र कोचेपछि एउटा कमान्डरजस्तो लाग्नेले ‘केटा’ हरूलाई आदेशको स्वरमा सोध्यो, ‘ए केटाहरू हो, सबै सामान ठीक पारिस् ?’ ‘ठीक भो’ साप्’ केटाहरूको एकैसाथ जबाफ फर्काए । ‘हतियार लोड गरिस् ?? सबै ठीकठाक छ ? अहिले मौकामा, चाहिएको बेलामा नपड्किएला नि ???’, उसले लापर्बाहीपूर्वक आदेश दियो । कमान्डरवालाका यी पछिल्ला शब्दहरूले मरो मनभित्र नमिठो गरी बिझायो । मनमा लाग्यो, यी बगरेहरूले अवश्य हामीलाई कतै मार्न लैजाँदैछन् । अनि मनमनमा लाग्यो– कस्तो शिक्षकले पढाएछन् कुन्नि ? आदर र सम्मान त परै जाओस्, नेपाली व्याकरण एउटा वाक्य पनि शुद्ध बोल्न नजान्ने !
यसरी मानसिक त्रासको भुमरीमा पार्दै उनीहरूले हामीलाई मध्यरातमा एउटा अस्पतालजस्तो ठाउँमा पु¥याए । २÷३ तल्लामाथि पु¥याएपछि आँखाको पट्टी खोलियो तर हतकडी खोलिएको थिएन । रोएको, बिलौना गरेको, चिच्याएको, अपशब्द बोल्दै हकारेको सुनिने त्यो ठाउँ वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल महाराजगन्ज रहेछ, पछि थाहा भयो । हामीलाई केही क्षणमै अङ्गभङ्ग भएर स्टेचरमा सुताइएका र जीवनको अन्तिम पलमा पुगेजस्ता देखिने बीभत्स अनुहारनजिक लगेर सोधियो, ‘ए ? तँ यसलाई चिन्छस् ?’ स्टेचरमा सुताइएकोमध्ये एकजनाले नियालर हेरेझैँ ग¥यो र बिस्तारै मुन्टो फर्कायो । मलाई लाग्यो हामीलाई कुनै ठूलै षड्यन्त्रमा फसाइँदै रहेछ । उसले ऐयाऽ, ऐयाऽगर्दै अर्काेतिर मुन्टो बटारेपछि मैले सोचेँ– यो इमानदार रहेछ । पुलिसभित्र पनि इमानदारहरू हुँदा रहेछन् क्यार । तर मेरो तन्द्रालाई पल्टा ख्वाउँदै पल्लो स्ट्रेचरमा छट्पटाइरहेको अर्काे पुलिसले हतास हुँदै भन्यो, ‘यो थियो हजुर ¤ ए, हान्हान्, अझै जिउँदै छ भन्दै थियो यो… । यसले त जोर राइफल भिरेको थियो साप्….।’
यति भनिसकेपछि हामीलाई हतकडी लगाएर र आँखामा कालोपट्टी बाँधेर घिसार्नेहरूका आँखा झन्झन् राता र डरलाग्दा हुँदै गए । उनीहरूका हाकिम हुनुपर्छ सायद यता र उता केके न खोजेझैँ र भेटेझैँ गरी दगुरिरहेका थिए । एउटाले तनक्क तन्केर सलाम ठोक्यो र भन्यो, ‘पत्ता लाग्यो साप्, यिनीहरू नै रहेछन् । घाइते केटाले ठ्याक्कै चिन्यो । हुलियासमेत मिल्यो…।’
अझ क्रूर र हिंस्र्रक व्यवहार गर्दै हामीलाई फेरि कालोपट्टी र हतकडीसहित भ्यानमा कोचेर रातारात कतै लगिँदै थियो । भ्यानवालाहरू अब हामीलाई सीधै आतङ्ककारी, हत्याराजस्ता शब्द प्रयोग गरिरहेका थिए । ‘हाम्रा साथी मार्ने आतङ्ककारी यिनै हुन् । यिनीहरूलाई कतै लगेर मारिदिनुपर्छ’, उनीहरू हाकाहाकी हामीलाई सुनाएरै भन्थे । उनीहरूसँग आफ्नो तथ्य कुरा राख्न खोज्नु र निर्दाेषिताको प्रमाण पेस गर्ने प्रयास गर्नु बगरेका अघिल्तिर खसीबोकाले जीवनदान माग्नुसरह थियो ।
त्यस्तै बिहानको ३/४ बजेतिरको समयमा हामीलाई एउटा खोरमा लगेर कोचियो । हामी कहाँ लगिएका छौँ भन्ने हामीलाई पनि थाहा थिएन । साथीहरूलाई छिन्नभिन्न पारिसकिएको थियो । घरपरिवारका सदस्यहरूलाई थाहापत्तै थिएन । गिरफ्तार गर्नुअघि पुर्जी दिनु त कता हो कता, थुनिसकेपछि पनि कसैलाई खबर गरिएन । हामीलाई बेपत्ता परेर हत्या गर्ने षड्यन्त्र गरिएको रहेछ ।
तीन दिन तीन रातसम्म खानु न पिउनु एउटा सानो कोठामा कोचिएको थियो । एउटा फाटेको गुन्द्रीको चौटो थियो भुइँमा । बिस्तरा भनौँ वा उपियाँ र उडुसको गुँड, ओढ्नेओछ्याउने जे भने पनि त्यही थियो । पुसको ठिहि¥याउँदो समय । मानिसको स्वरूपका बगरे हुन् वा पुराकथाहरूमा वर्णन गरिएका राक्षस हुन् जस्तो लाग्थ्यो अघिल्तिर हतियार लिएर उभिएकाहरू ।
उज्यालो नदेखेको र राम्रो शब्द नसुनेको धेरै भइसकेको थियो । आपसमा गुनगुनाउनु वा एकअर्कामा गफगाफ गर्न, छलफल गर्न पाउनु त टाढाको कुरा, हतकडी र नेलको आवाज आयो भने पनि बाहिरपट्टिबाट कुनै पुलिसले बीभत्स गाली गरेको सुन्नुपथ्र्याे । ‘भट्टेडाँडा प्रहरीचौकीमा साहसिक आक्रमण’ गर्ने व्यक्ति हामीलाई नै ठह¥याइएको थियो । त्यो ठाउँ जिप्रका हनुमानढोका रहेछ, पछि ‘बयान’ का लागि कुमार कोइराला वा यस्तै नामको पुलिस अधिकारीको कोठामा पु¥याएर एकछिन आँखाको पट्टी खोलिदिएपछि थाहा भयो । ‘अपराध अनुसन्धान’ हो वा ‘आतङ्ककारी नियन्त्रण’ कुन शाखाका हाकिम रहेछन् उनी । मैले प्रस्ट शब्दमा भनेँ, ‘म दैनिक रूपमा हिमालय टाइम्स पत्रिकामा सम्पादन तथा समाचार लेखनका लागि खटिरहेको छु । दैनिक बेलुका ३–४ बजेदेखि राति ११–१२ बजेसम्म त्यहाँ हाजिर छु । स्वतन्त्र लेखन र आफ्नो पत्रिका ‘नौलो बिहानी’ को लेखन÷सम्पादनमा अरू समय दिन्छु । आस्थाकै आधारमा कसैलाई कुनै घटनामा मुछेर षड्यन्त्रपूर्वक फसाउन पाइँदैन ।’
आँखामा पट्टी, हतकडी र नेल भिराइएकै अवस्थामा सायद हाम्रो वास्तविकता बुझेको व्यक्ति हुनुपर्छ एकजना प्रहरीजवानले हामी दुईजनालाई भट्टेडाँडा (घटनास्थल) तिर लगिँदैछ र त्यहाँ लगेर मुठभेडका नाममा समाप्त परिँदैछ भन्ने सूचना दिए । मसँगै रहेका साथी भरत अलि चिन्तित देखिन्थे । उनले आफ्ना प्राविधिक पदमा डीएसपी रहेका मामा नाताका मानिसलाई फोन गरिदिन ती सहृदयी पुलिसलाई आग्रह गरे । सायद प्रहरीचौकी आक्रमण गरेर देशको राजधानीमै राज्यसत्तालाई चुनौती दिने विद्रोही छापामार भेट्न नसकेर विश्वमै लाजमर्दाे बन्नपुगेको काङ्ग्रेसी सरकार हामी दुईजना निर्दाेष पत्रकारलाई भट्टेडाँडामा लगेर भिडन्तका नाउँमा बलि चढाएर आफ्नो अनुहार छोप्ने षड्यन्त्र गरिरहेको थियो । संयोगवश साथीका मामाले हाम्रो वास्तविकता बुझिदिए । मध्यरातमा भट्टेडाँडा लैजानुअघि नै उनी हाम्रो जमानी बसिदिए । षड्यन्त्रकारी राज्यसत्ताले पालेका क्रूर र अविवेकी जत्थाभित्रका एक ती पुलिस हाम्रो मात्र नभएर सबै न्यायप्रेमी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूका आफन्त हुन्जस्तो लाग्यो । जन्मिसकेपछि मृत्यु त एक दिन अवश्य हुन्छ नै । हजारौँ सहिदहरूले दुस्मनविरुद्धको लडाइँमा वीरगति प्राप्त गरिरहेका थिए । लाग्यो, भिडन्तमा बहादुरीसाथ सहादत प्राप्त गर्नुमा बेग्लै आनन्द आउँदो होला । यसरी बेथान वीरता दिवस मनाउने क्रममा हामीले झन्डै क्रूर शासकहरूको आज ढाक्न बलि दिनुपरेको थियो । बेथान पानीघाटमा गौरवशाली बलिदान गर्ने महान् सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली ।
जनसांस्कृतिक महासङ्घले राईलाई दिइयो समवेदना